Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTurkey zokuPhula » I-Turkey iqinisa izithintelo ze-COVID zokufika kwabangaphandle
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuhlaziywa kuyenziwa ngenjongo yokuthintela ukusasazeka kwesifo se-COVID-19 eTurkey, kwaye imiselwe ukuba iqale ukusebenza ngoMgqibelo, nge-4 ka-Agasti.
I-Turkey ihlaziya izithintelo ezichasene ne-COVID zokufika kwabangaphandle.
Imigaqo ijolise ekunqandeni ukusasazeka kwesifo se-COVID-19 eTurkey.
Imigaqo ehlaziyiweyo isetelwe ukuqala ukusebenza ngomso.
Icandelo loMphathiswa Wezangaphakathi laseTurkey likhuphe isetyhula namhlanje, ibhengeza uhlaziyo olutsha lweemfuno kunye nezithintelo kubatyeleli abafikayo kweli lizwe bevela phesheya.
Uluhlu olubomvu: iBrazil, uMzantsi Afrika, iNepal neSri Lanka
Ukurhoxiswa kweenqwelomoya ngokuthe ngqo IBrazil, uMzantsi Afrika, iNepal neSri Lanka iya kuqhubeka kude kube sisinye isaziso.
Abagibeli abaya kula mazwe kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo baya kucelwa ukuba bangenise iziphumo ezibi zovavanyo lwePCR abafumene iiyure ezingama-72 ubuninzi ngaphambi kokungena ikarikuni.
Kananjalo baya kubekwa bodwa iintsuku ezili-14 kwiindawo ezimiselwe zii-rhuluneli, apho kuvavanyo olubi kuya kufuneka elinye ixesha. Ukuba kukho iziphumo zovavanyo eziqinisekileyo, isiguli siya kugcinwa sodwa, esiya kuthi siphele ngesiphumo esibi kwiintsuku ezili-14 ezilandelayo.
Bangladesh, India kunye Pakistan
Imithetho yokuhamba ye-Bangladesh, i-India kunye ne-Pakistan ziye zenziwa lula, kwaye abakhweli abavela kula mazwe, okanye abo bebekwelo mazwe kwezi ntsuku zili-14 zidlulileyo, baya kucelwa ukuba bangenise iziphumo ezibi ze-PCR ezifunyenwe ukuya kwiiyure ezingama-72 ngaphambili.
Abantu ababhala uxwebhu lokufumana iidosi ezimbini ze-COVID-19 zokugonya ezinikwe imvume nguMbutho wezeMpilo weHlabathi okanye iTurkey okanye idosi enye yesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson ubuncinci kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokungena eTurkey baya kukhululwa ekuvalelweni bodwa.
I-UK, i-Iran, i-Egypt kunye ne-Singapore
Abakhweli abavela e-UK, eIran, e-Egypt, okanye eSingapore baya kucelwa ukuba bangenise iziphumo ezibi kuvavanyo lwe-PCR olwenziwe ubuninzi beeyure ezingama-72 ngaphambi kokungena.
Kubakhweli abahamba besuka e-Afghanistan, abo banokunika uxwebhu olubonisa ukuba babenikwe iyeza lokugonya le-COVID-19 kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo okanye ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwi-COVID-19 kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo abayi kufuna iziphumo zovavanyo okanye ukuvalelwa bodwa.